सानो पाइलाको १४ वर्ष ! ‘हाम्रा लागी सबै, सबैका लागी हामी’ – Nepal Reports
सानो पाइलाको १४ वर्ष ! ‘हाम्रा लागी सबै, सबैका लागी हामी’
धन्यवाद ! वीरगञ्ज, हामी कृतज्ञ छौँ ।
२३ वर्षको उमेरमा यो भुमिसँग, यहाँको समुदायसँग अनि यहाँको राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवेषसँगको अपनत्वले हामीलाई सानो पाइला स्थापनार्थ उत्प्रेरित ग¥यो । फलतः हामी केही साथीहरू र अग्रज एकीकृत भएर सानो पाइला बन्यौं ।
देशमा राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक चेतनाको विकास आन्दोलनको स्वरुपमा अघि बढ्दै थियो । राजनीतिक विकासक्रम र सशस्त्र युद्धपछिको मूल प्रवाहभन्दा पर मधेश आफ्नो वजूद तलास्दै थियो । आफ्नो पहिचान र अधिकारसहितको समतामुलक भविष्य बुन्दै थियो ।
हामीले यहाँका युवा र समुदायसँगको सहकार्यलाइ पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौं । युवावर्ग टेको बनेर उभिएमा देशकै मेरूदण्ड हुन्, यथोचित व्यवस्थापन हुन नसके विध्वंसकारी शक्ति पनि तिनै हुन सक्छन् । सन् २००६ मा वीरगञ्जमा स्थापना भएको सानो पाइलाले युवाहरुको समस्यालाई गहिरोसँग अध्ययन गरी उनीहरूको जोश–जाँगरलाई एउटा दिगो सशक्तिकरण अभियानमा परिणत गर्दै आएको छ ।
लागु औषधको कुलतमा र अपराधिक गतिविधिमा फसेका युवाहरुलाई समाजमा पुनस्र्थापित गर्ने मात्र नभइ उनीहरुलाई संस्थाभित्रै र समुदायमा विभिन्न नेतृत्व तहमा हामी स्थापित पनि गर्दै आइरहेका छौं । हामी समावेशी र दिगो सामुदायिक विकासका लागि ‘तल हुँदै माथि जाने सिद्धान्त (बटम अप एपरोच) को अनुसरण गर्दछौं । अनि त्यस्ता जटिल मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुन्छौं, जसमा काम गर्नु अपरिहार्य त छ तर सरकार र निजी क्षेत्रको प्राथमिकतामा पर्न सकिरहेका छैनन् । १४ वर्ष लामो यो यात्रामा हामी यिनै विषयमा घोत्लियौं । मन्थन गरिरह्यौं । अध्ययन–अनुसन्धानमा जुटिरह्यौ । काममा खटिरह्यौं । जसका कारण कुलत र अपराधमा फसेका थुप्रै युवाहरू हामीसँगको सहकार्यमा अहिले सम्मानित र उदाहरणीय बनेर हाम्रै समाजमा स्थापित भएका छन् ।
सीमान्तकृत समुदायलाई राष्ट्रिय जीवनमा एकीकृत गर्दै उनीहरूको सशक्तिकरण गर्ने र मुलुकको दिगो विकासमा योगदान पु¥याउनेतर्फ पनि हामीले पाइलाहरू बढाएका छौं । ‘दाता रुचाउने र रिझाउने’ परियोजनाभन्दा पनि समुदाय अपेक्षित र भूगोल सुहाउँदा परियोजनाहरू हाम्रा प्राथमिकतामा छन् । जसबारे यहाँहरू पनि वाकिब नै हुनुहुन्छ ।
त्यसबेला समुदायमा हामीले देखेको पहिलो समस्या लागु औषधको प्रयोग, उत्पादन र त्यसको विक्री वितरण थियो । नगदेबालीका रुपमा गाँजा र अफिमको खेती हुन्थ्यो । युवादेखि प्रौढसम्म यसको कारोबार र लतमा थिए । लागुऔषधकै कारण त्यसबेला वीरगञ्ज अपराधको सहरमा परिणत हुँदै गएको भान हुन्थ्यो । जुनबेला हामीले लागु औषधविरुद्ध थालेको लडाइँ अन्तर्गत अफिम खेतीको ठाउँमा वैकल्पिक बाली लगाउने अभियान धेरै हदसम्म सफल पनि भयो । जुन अभियानले आजपर्यन्त निरन्तरता पाइरहेको छ । यसमा प्रहरी-प्रशासनका अधिकारी, सामाजिक अभियन्ता र संचारकर्मीहरूको योगदानको पनि म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु ।
महिला तथा युवतीको प्रजनन् स्वास्थ्यदेखि शिक्षासम्मका अभियानलाई समुदायको अगुवाईमा हामीले अघि बढाइरहेका छौं । बालश्रममुक्त समाज निर्माणमा पनि हाम्रो अभियान चलिनै रहेको छ । श्रमजिवी र मजदुरका हकहितदेखि औद्योगिक विकास समेत हाम्रा अभियानमा समेटिएका छन् । मधेशको मुद्दालाई राज्यको मूलप्रवाहसँग जोड्न विचार–मन्थन पनि सानो पाइलाको अभियानमा प्राथमिकतामा छन् । वीरगञ्जलाई केन्द्र बनाएर थालिएका हाम्रा पाइला अहिले वागमती, गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म विस्तारित हुन सके । महाभूकम्पका समयमा सानो पाइलाले गोरखामा थालेको अभियानले त अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमको ध्यानाकृष्ट गर्न सफल भयो । देशविदेशमा हामीले गरेको कामको चर्चा चल्यो ।
भारतमा श्रम र यौनका लागि बेचिएका कयौं बालबालिका र युवतीहरूलाई सानो पाइलाले समाजमा पुनस्र्थापित गर्न पनि सफल भएको छ । हिमालयन ज्वैलरीमार्फत हामीले उनीहरूलाई उद्यमी पनि बनाउन सकेका छौं । जसले बनाएका गरगहनाको बजार विदेशमा समेत विस्तार भएको छ ।
करिब एक वर्षदेखि विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको कोरोना महाव्याधीको विषम परिस्थितिमा प्रदेश–२ मा सानो पाइलाले लिएको पहलकदमी त हाम्रो मानसपटलमा ताजा नै छ । कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँ कसरी लड्ने भन्नेमा सबै क्षेत्र अलमलमै रहेका बेला सानो पाइलाले रोजीरोटी गुमाएकालाई खाद्यान्न राहत, दिनदुखीलाई भोजन, स्वास्थ्य संस्थालाई प्राविधिक सहयोग, संक्रमितलाई आइसोलेसन र पौष्टिक आहार अनि परामर्शको व्यवस्था गर्न हामी सफल भयौं । जसका कारण यहाँ काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति सृजना हुन पाएन ।
अन्त्यमा, सानो पाइलाको तेह्र वर्षको यो यात्राका क्रममा हामीले समुदायप्रति अझ बढी जिम्मेवारीवोध गरेका छौं । समुदायबाट प्राप्त विश्वास र साथकै बदौलत हामीले यो यात्रा तय गर्न सकेका हौं । हामीलाई सहयोग गर्ने सामाजिक अभियन्ता, उद्यमी, राजनीतिकर्मी, संचारकर्मी, सरकारी अधिकारीसमेत सबैमा १५ औं वर्ष प्रवेशको यो सुखद अवसरमा आभार व्यक्त गर्दछौं । र, आउँदा दिनहरूमा पनि निरन्तर साथ – सहयोगको अपेक्षासहित यहाँहरूले हामीमाथि राख्दै आएको विश्वास र दिँदै आएको साथको सधैं झै पालना गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाउँदछौँ ।
धन्यवाद ! वीरगञ्ज, हामी कृतज्ञ छौँ ।।